Commune IHARINARIVO - Madagascar Informations
10 mars 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
Kaomina mendrika ny ho ampiana ny kaomina Iharinarivo noho izany tontosa androany ny fiadiana fototra ny tsena anisany goavana eto anivony amin’ny kaomina ambanivohitra Iharinarivo distrika Ambohidratrimo.
Izany dia vokatrin’ny fiaraha miasa matotra sy matipaika eo anivony Cnaps sy ny Ong Madasun izay nanolotena hanohan ity kaomina ity, ankoatra ny fahazoany kaomina ny fanampiana avy amin’ny fanjakana sy ny vola teo ampelatana.
Mitentina hatrany amin’ny 77 tapitrisa ariary ny tetibidiny tsena satria tsena natao hanara-penitra sy
natao hifanakalozana amin’ireo tantsaha sy mora hifandraisana amin’ireo kaomina manodidina rehetra.
Marihina fa tsy hijanona hatreo ny tetik’asa fa anisany tetik’asa handrandrainy mponina ihany koa ny fananganana tsenan’omby ka hiandrasana fanomezan-dalana avy amin’ny ministerany fambolena sy ny fiompiana.
Ho ezahana ho vita mialohany hanantanterahana ny foara goavana ho hatao eto anivony kaomina ny tsena izany hoe ny faha 22 ka hatraminy faha 25 ny volana jiona ho avy izao ka hisantarana ny tsenany Iharanarivo.
Raha tsiahivina dia anisany tetik’asany ben’ny tanana ny hanangana tsena goavana eto anivony kaomina ary tontosa izany ankehitriny.
Fa raha ny mahakasika ny fanohanana ny Ong Madasun kosa dia mbola hisy ny fampiofana omena ny tanora eto anivony fokontany miisa 9 ka toy izao ny fanam-pipanazavana.
← Cyclone tropical ENAWO
Le PR à Ambohitsilaozana dans le district d’Ambatondrazaka →